Vava asa amin’izay, fa tsy asa vava… | NewsMada
Vava asa amin’izay, fa tsy asa vava…
Par Taratra sur 11/06/2018
Fitakiana izao, fangatahana… Samy manampatra ny alahelo sy ny faniriany amin’ny praiminisitra iraisana avokoa ny rehetra amin’izao. Manomboka amin’ny depiote 73 ho an’ny fanaovana izany. Eo koa, ohatra, ny sendikà, ny mpiasam-panjakana; eny, na ny olom-pirenena sy ny vahoaka ifotony aza.
Nivoaka avokoa izay niaretana sy niforetana nandritra izay efa-taona mahery izay: tsy nisy nihaino na niraharaha tsinona hatramin’izay. Izay nitady hihetsika rehetra, voasoketa ho manakorontana sy manongam-panjakana. Nopotehina avy hatrany izany, ka niotrika anaty ho azy ny hetaheta sy ny fitarainana.
Olan’ny vahoaka ifotony ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa… Manampy trotraka ny nafitsoky ny mpitondra sy ny mpiray petsapetsa aminy, na teratany na vahiny, na havana aman-tsakaiza: fandrobana tany, fanamparam-pahefana, kolikoly, fanjakazakan’ny tsimatimanota…
Ny hamahana ny olana amin’izany rehetra izany izao no tena zava-dehibe mahamaika ny vahoaka? Na antenainy sy andrasany… Mba tena hisy tokoa ny hoe fiovana sy fanovana? Mila vava asa avy hatrany amin’izay, fa tsy asa vava intsony. Be izay resaka sy fampanantenana izay. Azo inoana (ho) tanteraka avokoa?
Tsy maintsy andalanina ny raharaha. Izay no mety hanahirana, tsy hampifankahazo, ahina hampifanditra aza… Dieny izao, mila mifamarafara tsara: iza no manao inona, aiza ary rahoviana? Misy, ohatra, ny azo tanterahina avy hatrany: mila fanapahan-kevitra, fahasahiana, finiavana… Ao ny tsy maintsy miandry.
Sao tsy mifankahazo ny resaka? Ny resaka na ny teny no tsy atao be, tsy laitra ny mamerina azy. Ho voahaja sy ho tanteraka tokoa àry ve ireo teny nomena sy ny kabary natao? Na avy aiza na aiza, na iza na iza… Mba tsy hisy ny fiverenana na fivilian-dalana noho ny mety ho fahadisoam-panantenana tsy amin’ny antony.
« Tompo amin’ny teniny ny tsirairay, saingy lasa andevon’izany raha vao voalaza », hoy ny ohabolana afrikanina iray izay.